7 Cross Court, Stafford | NguBell
Eli gumbi liqaqambileyo, lithokomele kwaye lixineneyo linegumbi elinye lenzelwe ukuthuthuzela kunye nokusebenza kwengqondo ngokufanelekileyo ukuhlalisa umntu omnye okanye ababini. Le ndlu icwangciswe kakuhle kwaye ixhamle kwigumbi lokuhlala elilula, ikhitshi, igumbi lokuhlambela kunye negumbi lokulala elibanzi Kukho iTV, ukufikelela simahla kwi-intanethi engenazingcingo kunye neendawo zokupaka zabucala.
Igumbi lokulala: Kukho igumbi lokulala elikhulu elihonjiswe ngemibala emnandi edityanisiweyo, linomandlalo okumgangatho ophezulu, indawo yokuxhoma iimpahla zakho kunye nesifuba sokutsala esikunika indawo eninzi yokugcina izinto zakho. Ibhedi iya kwenziwa kusetyenziswa iilinen ezintsha ezimhlophe ezilungele ukufika kwakho.
Nangona singahlali kwizakhiwo sihlala sifowuna kuphela kude, uya kufumana ikhadi lethu lokunxibelelana kwigumbi lokuhlala xa ufika ngoko zikhululeke ukusitsalela umnxeba ukuba kukho nantoni na oyifunayo. Siyavuya ukubonelela ngolwazi lwasekhaya kuhambo lwakho ukuba luya kusetyenziswa ukuze ukwazi ukufumana okuninzi kokuhlala kwakho, uya kufumana amaphecana kwigumbi elinomtsalane onokuthi ufune ukuwandwendwela.
Idiphozithi Yokhuseleko - ukuba wenza umonakalo kwikhaya, usenokubhataliswa ukuya kutsho kwi-$332